Ọba akwụkwọ na Foto, Autostart na 2016 Macbooks, macOS 10.12.3, Tim Cook Omume, na ndị ọzọ. Kacha mma n'izu na m si Mac | Esi m mac
Ọba akwụkwọ na Foto, Autostart na 2016 Macbooks, macOS 10.12.3, Tim Cook Omume, na ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac
Pedro Rodas kwuru | | Apple, Apple Watch, MacBook Pro
Otu ụbọchị Sọnde anyị na-agbadata ịrụ ọrụ ma soro gị kerịta isiokwu ndị ama ama izu. Anyị nwere omenaala nke isoro gị kerita mkpokọta ihe a n'ụtụtụ ụbọchị ụka, ma taa o were obere oge tupu ịkwadebe ya, agbanyeghị na anyị ahapụbeghị oge anyị chọrọ.
Izu a enwere akụkọ na-ewu ewu na a hụrụ ebe niile na blọọgụ anyị na ndị ahụ bụ nke anyị ga-echetara gị n'okpuru.
Anyị na-amalite nchịkọta a na isiokwu nke anyị gwara gị otu esi ejikwa foto gị ya na ọba akwụkwọ na ngwa Foto dị iche iche, ka inwee ike idozi foto gị na nchekwa. Anyị kọwakwara otú nnukwu akpali ma detuo ọba akwụkwọ ndị ahụ na Mac dị iche ma ọ bụ na mpụga ike mbanye na a nnọọ mfe n'ụzọ.
Akụkọ ọzọ na-ewu ewu bụ nke anyị tụlere etu esi ejikwa mmalite nke MacBook Pro 2016 ọhụrụ ka ha ghara ịgbanye na akpaghị aka mgbe ị mepee mkpuchi ahụ. na 2016 MacBook Pro a na-etinye ọrụ nke ịgbanye Mac na-akpaghị aka, mgbe anyị buliri mkpuchi ma ọ bụ jikọọ Mac na ike. Maka ọtụtụ ndị ọrụ ọrụ a zuru oke, n'ihi na n'ọtụtụ pasent, mgbe anyị buliri mkpuchi anyị chọrọ ịmalite ịrụ ọrụ ozugbo. N’ụzọ dị iche, ndị ọzọ na-ahọrọ ịrụ ọrụ a na onye mbụ.
Kedu ihe ị chere Tim Cook rere 30.000 nke Apple Apple? Nke a bụ obere akụkụ, pere mpe, nke ngụkọta omume ọ nwere ke enye ugbu a CEO nke Apple. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iche na mbak ndị a rere ụbọchị ole na ole gara aga ga-akwụ ụgwọ maka ụgwọ ọnwa Cook, n'ihi ebumnuche ahịa a na-ezuteghị n'afọ ahụ, ihe ọtụtụ n'ime anyị na-agaghị emeli ma Ee, nnukwu ndị isi nke ọtụtụ mba ma ọ bụ ụlọ ọrụ dị ukwuu nke Apple, dị ka Tim Cook n'onwe ya, nwere ike ime ya.
Izu a ka ahọrọkwara Apple maka ẹkedori nsụgharị gọọmentị maka ndị ọrụ macOS 10.12.3 niile Ma ọ bụrụ na izu gara aga anyị agbapụrịrị beta mbipute maka ndị mmepe, izu a ka Apple họọrọ iji malite ụdị ọhụrụ ahụ. Na nke a ọ na-atụgharị gaa na ndozi ndị etinyere na nsụgharị beta gara aga, ihe ngwọta nke ụfọdụ chinchi na mmezi nke njehie. Dị ka ọ dị na nsụgharị ndị gara aga nke macOS Sierra, ụlọ ọrụ ahụ na-agbakwunye ụfọdụ mgbanwe na usoro nke ọrụ sistemụ, mana ha na-elekwasị anya na mmelite arụmọrụ na ndozi ahụhụ.
Agbanyeghị, nke a abụghị naanị mmalite nke izu ahụ yana ọ bụ obere ezinụlọ, Apple Watch natakwara ụdị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ ya. Apple nyere ndị ọrụ nke Apple Watch emelite sistemụ nrụọrụ gị, kpọmkwem ọ gụnyere ọhụrụ version 3.1.3 maka ụlọ ọrụ ese. Anyị na-eche ihu na mbipute nke na ụkpụrụ nwere inwe mgbanwe ole na ole ma e jiri ya tụnyere mbipute 3.1.1 ma e wezụga otu, ihe ngwọta maka nsogbu nke hapụrụ ngwaọrụ ndị ahụ. Ekwesịrị ikwu ya mbipute watchOS 3.1.1 nke eweputara n’ime onwa Disemba butere ezigbo nsogbu nye otutu ndi oru ndị hụrụ ngwaọrụ ha egbochi mgbe ha na-emelite, ebe ọ bụ na e gosipụtara ọdịda ahụ, ụlọ ọrụ wepụrụ mmelite ahụ ma ihe karịrị otu ọnwa agafeela kemgbe ahụ.
Apple mechiri ụlọ ahịa ọhụrụ pụrụ iche maka ya Apple Watch na France. Daysbọchị tupu ekpughere Apple Watch bụ ọtụtụ asịrị na-ekwu na Apple choro itinye isi ya n'ime uwa nke ejijiN'ezie, ọtụtụ ndị odeakụkọ sitere na ngalaba a bụ ndị gara ngosi nke Apple Watch, ihe atụ ga-adị na ọla edo 18-karat, yabụ echiche nke Apple iji kpọọ ụwa nke ejiji na mmemme ahụ, ka Ha ga-ebido ịkpọsa ngwa ọrụ ha na ngalaba a na-akpali ọtụtụ nde dollar, ọkachasị na United States. Apple mechiri ụlọ ahịa Apple Watch na Galeries Lafayette na Paris.
Ọ bụghị akụkọ na ụmụ okorobịa ndị na-arụ ọrụ kwa ụbọchị na Cupertino anaghị ahapụ ọbụna obere nkọwa na ohere. Apple jiri ọhụụ ọhụrụ, oge a otu onye kere kpọmkwem maka ha, na weebụsaịtị ha nke Www.apple.com, aha ya San Francisco.
Anyị nwere ike ịhụla etu esi depụta akwụkwọ edemede nke ibe ụlọ ọrụ kpamkpam. Modeldị mmiri iyi ọhụụ pụtara n'afọ 2015 n'akụkụ Apple Watch. Ma, ọ bụ site n'izu a, mgbe enwere ike ịhụ ya na weebụsaịtị Apple niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Ọba akwụkwọ na Foto, Autostart na 2016 Macbooks, macOS 10.12.3, Tim Cook Omume, na ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac
DiskActivity nyochaa ojiji nke diski ike anyị, n'efu maka obere oge
Otu esi amata ọkwa batrị nke AirPods gị site na Apple Watch